သရက်မြို့နယ်ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ မေတ္တာရှင်အခမဲ့ဆေးကုသခန်း ၁ဝနှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်ပေးအပ် – ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
သရက်မြို့နယ်ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ မေတ္တာရှင်အခမဲ့ဆေးကုသခန်း ၁ဝနှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်ပေးအပ်
February 14, 2018 USDP 2016
သရက်မြို့နယ် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ဖွင့်လှစ်ထားသော မေတ္တာရှင် အခမဲ့ဆေးကုသခန်း ၁ဝနှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ကို ယနေ့မွန်းလွဲ ၁နာရီက အဆိုပါဆေးခန်း၌ ကျင်းပ သည်။
၂ဝဝ၈ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်က ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော သရက်မြို့နယ် ပြည် ခိုင်ဖြိုးပါတီ မေတ္တာရှင်အခမဲ့ဆေးကုသခန်း (ပြင်ပ လူနာ) ၁ဝနှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီ မြို့နယ်ပါတီကော်မတီဝင်များက ၁ဝနှစ် တိုင်တိုင်စေတနာဖြင့် တာဝန်ယူကုသပေးနေသော ဆရာဝန်များအား ဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်များ ပေးအပ် ပြီး ဆေးကုသခံလူနာများအား အာဟာရမုန့်များ လက်ဆောင်ဝေငှပေးခဲ့သည်။
← ကမ္ဘာပေါ်တွင် တန်ဖိုးအများဆုံး လူစာရင်းအဖြစ် မန်စီးတီးအသင်း မှတ်တမ်းဝင်
ဇီးကုန်းတွင် မာရသွန်ပြိုင်ပွဲကျင်းပ →
April 24, 2017 USDP 2016 Comments Off on ဆိပ်ဖြူပြည်ခိုင်ဖြိုးရဲ့စေတနာ
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်ပိုင်း) ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ တိုင်း/ခရိုင်/မြို့နယ် စုံညီအစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်
December 6, 2016 USDP 2016 0
May 22, 2017 USDP 2016 Comments Off on ၂၁ . ၅ . ၂၀၁၇ ရက်​​နေ့တွင်​ ပဲခူးတိုင်း​ဒေသကြီး(အ​နောက်​ပိုင်း) ပြည်​​ထောင်​စုကြံ့ခိုင်​​​ရေးနှင့်​ဖွံ့ဖြိုး​ရေးပါတီ အမျိုးသမီး​ရေးရာ ​တွေ့ဆုံပွဲ အခမ်းအနားအား ပါတီဌာနချုပ်​ မှ အမျိုးသမီး​ရေးရာတာဝန်​ခံ ဗဟိုအတွင်း​ရေးမှူး ​ဒေါက်​တာ​ဒေါ်စန်းစန်းနွယ်​ ၊ ဗဟို​ကော်​မတီဝင်​ ​ဒေါ်ခင်​​ရွှေမြင့်​ တို့တက်​​ရောက်​​ဆွေး​နွေးခဲ့ကြပြီး ၄င်းအခမ်းအနားသို့ ပဲခူးတိုင်း​ဒေသကြီး ဒုတိယဥက္ကဌ ဦး​အောင်​ချိုဦး နှင့်​ တိုင်းပါတီ​ကော်​မတီဝင်​များ ၊ ခရိုင်​ ၊ မြို့နယ်​များမှ အမျိုးသမီး​ရေးရာတာဝန်​ခံများ ၊ ​ကောမတီဝင်​များ တက်​​ရောက်​ခဲ့ကြပါသည်​။ #Duwon